Ukuvakasha kweNiagara Falls kusuka eNew York | Ukuhamba kwe-Absolut
INew York City, eyaziwa njengedolobha elingalali, ingenye yezindawo eziningi zamaphupho ezihambi. Ukuhamba leli dolobha elikhulu kalula kuyadingeka ukuthi uchithe okungenani isonto lapho, futhi ubheke isikhathi sokubona izindawo eziseduze zokuthakazelisa, ezifana iziMpophoma ezidumile zaseNiagara.
Izinhlelo uma kukhulunywa ngokubona iNew York azipheli. Ukusuka ekuhambeleni okudingekayo eMbusweni Wombuso, ngombono wedolobha phezulu, ukubona umbukiso womculo ku-Broadway, uhambahamba ophithizelweni lweTimes Square noma ubona iBrooklyn Bridge. Ku-Big Apple ungajabulela, yebo, okuncane kwemvelo sibonga iphaphu elihle eliluhlaza okuyiCentral Park. Kodwa-ke, abathandi bezikhala eziluhlaza bangaphuthelwa ubukhulu bezindawo zemvelo.
Kungakho sikuphakamisa ukuthi ube Ukuvakasha okumangalisayo futhi okungenakulibaleka kweNiagara Falls kusuka eNew York.
1 Ungafika kanjani eNiagara Falls
2 Yini ongayibona ohambweni lwe-Niagara Falls
3 Kungani kuwufanele
Ungafika kanjani eNiagara Falls
Izimpophoma zaseNiagara ziyisimangaliso sangempela, ngakho-ke ungaphuthelwa yithuba lokuzifinyelela. Ukwenza kube lula, ungabhuka ukuvakasha ngeSpanishi ku- Iwebhusayithi yamaHellotickets, ukuze sizokhathazeka kuphela ngokujabulela ukubukeka komhlaba.
Izimpophoma zitholakala ebangeni elingamakhilomitha angama-660, eduze kwedolobha laseToronto nasemngceleni waseCanada. Bangatholwa ngemoto ehlala cishe amahora ayisithupha, ngebhasi, ngohambo lwamahora angaba yishumi, noma ngendiza, ngohambo lwamahora angaba mabili. Ngohambo oluqondisiwe uzofika ekuqaleni, emahoreni ayisikhombisa noma ayisishiyagalombili, ngaphezu kwenduduzo eyengeziwe yokungakhathazeki nganoma yini nokwengezwa kokwazi umlando nawo wonke amaphuzu athakazelisayo ngaphandle kokuhlela konke kusengaphambili.
Yini ongayibona ohambweni lwe-Niagara Falls
Ohambweni oluya eNiagara Falls olusuka eNew York bazosikhombisa konke esizokubona.
INiagara Falls State Park isinikeza umbono othakazelisayo ongabona kuwo lezi zimpophoma ezintathu, ngombono ophelele wokuthatha izithombe. AmaHellotickets afaka nohambo olwaziwa ngokuthi Maid of the Mist, nohambo lwesikebhe eduze nezimpophoma ezisuka endaweni yase-US.
Ohambweni oluya ezimpophomeni ungathatha imizila ethile yokuhamba ngeNiagara Gorge, enemizila enobude obuhlukile futhi evumela ukufinyelela kuzindawo ezizungezile.
Elinye iphuzu ongalivakashela ohambweni lwe-Niagara Falls yiGoat Island, isiqhingi esisenkabeni yezimpophoma esinesithombe somsunguli uNikola Tesla nombono weTerrapin Point.
Uhambo olufana nalolu olusiyisa eNew York lude futhi ludinga inhlangano eningi. Ukuqasha uhambo lokuya eNiagara Falls kusuka eNew York kuwumqondo omuhle, ngoba lolu hambo lude kakhulu futhi lungaba nzima uma lwenziwa ngemoto noma ngebhasi ngaphandle kokuholwa yilabo abayaziyo leyo ndawo.
Uhambo oluhlelwe yiHelloticket lusinikeza ithuba lokukhetha amaphakethe ahlukene ngokuvakasha usuku olulodwa noma eziningana, sazi indawo enhle yezimpophoma kodwa futhi nemizi efana neFiladelphia noma iToronto. Kulamaphakethe kuvakashelwa wonke amaphuzu athakazelisayo kulezi zimpophoma, kusukela esiQhingini seGoat kuya eNorgegara Gorge. Ngeke siphuthelwe noma yimuphi umsebenzi noma isikhala futhi sizokwazi ukubona le ndawo emangalisayo ngokuningiliziwe.
Kokubili kubathandi bemvelo nakulabo abakujabulela ukwenza imibiko yezithombe ezindaweni zobuhle obedlulele, lolu hambo lubalulekile olubalulekile okufanele lwengezwe lapho kwenziwa uhambo oluya eNew York.
Ngalezi zivakashi eziqondisiwe kuzofanele sibhalise kuphela, sikhethe ukuvakasha ngayo yonke imisebenzi yayo futhi sinikele sonke isikhathi sethu ekuzijabuliseni kule ndawo emangalisayo. Kuzoba yinto ongasoze wayilibala!
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukuvakasha kweNiagara Falls kusuka eNew York